60 jir isticmaalaysa ugxanta gabadheeda - BBC Somali
30 Juunyo 2016
Lahaanshaha sawirka justice
Haweeneey lixdan jirta ayaa dalka Britain, ku guulaysatay dacwad maxkamad si ay u isticmaasho ugxanta gabadheeda oo dhimatay si ay ilmo u dhasho.
Gabadheeda ayaa ugxanteeda ku kaydisay qaboojiye loogu tala galay ugxanta markii ay jirtay labaatan iyo saddex sano, kadib markii uu kansar ku dhacay.
Waxay dhimatay shan sano ka bacdi, iyadoo ka dardaarantay inay rabto in hooyadeed ay ugxanteeda isticmaasho oo cunug ay u dhasho.
Laakiin qoraal ma aysan ka tagin. Gudiga maareeya ilmo dhalista ee (Human Embryology and Fertilisation Authority) ayaa diiday in ugxanta gabadha la isticmaalo, oo kaydka qaboojiyaha laga soo bixiyo, maxkamaddana way ku taageertay.
Laakiin maxkamada racfaanka ayaa go'aankii maxkamadda diiday, waxayna go'aamisay in hooyada ay ugxanta isticmaali karto, sababtoo ah waxaa jira cadayn ku filan in gabadheeda ay ka dardaarantay intaysan dhiman.